रमेश उप्रेतीको किचेन रेसीपी– कुखुराको मासु कसरी पकाउने ?
मलाई त्यति धेरै मिठो बनाउन त आउँदैन । तर मासु पकाएको बेलामा साथीहरुले मिठो छ, पेट त भर्यो तर मन भरेन भन्छन् । त्यसैले मैले बनाएको मिठो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । त्यसैले आज..
अरुका यी सामान बिर्सेर पनि नराख्नुहोस्
कहिले काहिं अरुले प्रयोग गरेको सामान देखेर हामी लोभिन्छौं । कहिले चाहिं आवश्यक परेर नै अरुको सामान प्रयोग गर्छौं । तर कतिपयको चाहिं जानीजानी अरुको सामान प्रयोग गर्ने बा..
किरण केसीको रेसिपि, चिकेन चिल्ली कसरी तयार पार्ने ?
हाँस्य कलाकार किरण केसी अहिले टेलिसिरियल ब्रेक फेलमा व्यस्त छन् । सिरियलमा उनी नेवारी टोनमा बोल्ने गर्छन् । किरणले गरेको पात्रलाई दर्शकले खुबै रुचाएका छन् । अभिनय गर्दा..
व्यवसायिक काममा सफल हुन ध्यान दिनु पर्ने कुरा
मानिसले व्यवसायिक जीवनमा सफल हुन निकै मेहनत गरेको हुन्छ । तर आफ्नो रिस र ईष्र्यालाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने अन्तत त्यहि रिस मानिसको सफलतामा बाधा बन्न पुग्छ । व्यवसायिक ..
चम्कीलो छालाका लागि यी खाने कुरा सधै खानुहोस्
सफा ,चम्कीलो र सुन्दर छाला सबैले चाहेका हुन्छन् । तर सबैको छाला सुन्दर हुँदैन । तर पनि हामीले आफ्नो छालालाई स्याहार गरेर , खानपिनमा ध्यान दिएर आफ्नो छालालाई सुन्दर बनाउ..
बर्षामा छालाको स्याहार कसरी गर्ने ?
अन्य मौसमको तुलनामा बर्षातको समयमा छालामा संक्रमणको समस्या बढी हुने गर्छ । जो व्यक्तिलाई पहिले देखी नै छालामा समस्या छ उनीहरुलाई त बर्षातले अझै बढी सताउने गर्छ । आज हा..
तपाईँको जीवन बदल्ने १० महान विचार
कहिलेकाही अरुले भनेको एक लाईन पनि हाम्रो लागि सफलताको माध्ययम बनेको हुन्छ । त्यो सफलता राम्रो जीवनयापनदेखी करियरसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा हुन सक्छ । त्यस्तै आज हामी केही बिद्ध्वानहरुका केहि महान विचारहरु प्रस्तुत गर्दैछौ । जुन विचारहरुले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । १. यदि तपाईँ महान बन्न चाहनुहुन्छ भने अरुको स्वीकृती ल..
अशान्त मनलाई शान्त पार्ने तिन उपाय
कहिले काही सानो कुराले पनि हाम्रो मन अशान्त हुने गर्छ । जसले गर्दा हामी कुनैपनि काममा ध्यान दिन सक्दैनौँ । यदि यस्तो लामो समयसम्म भयो भने घरपरिवारको शान्ती पनि भंग हुने गर्दछ । मनको अशान्ती भगाउनको लागि तल उल्लेख तिन उपाय अपनाउनुहोस् तपाईँको मन फुरुङग हुने छ । १ सफा गर्ने मन अशान्त भएको समयमा […]
दिउँसो सुत्दा हुने फाईदा
यदि तपार्इँको दिउँसो सुत्ने बानी छ भने त्यो तपाईँको राम्रो बानी हो । सामान्यतया दिउँसो सुत्ने बानी भएका मानिसलाई हामी अल्छी को संज्ञा दिन्छौँ । तर यो अल्छीपना नभयर राम्रो स्वास्थ्यको निशानी हो । हफिंग्टन पत्रिकामा हालै प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार दिउँसो केहि समय सुत्ने बानी बसाल्नुपर्छ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार दिनमा केहि समय निद..
यी ६ बानी तपाईँमा छन् भने आजैदेखि त्याग्नुहोस्
जो कोही पनि एउटै कुरामा केन्द्रीत रहन्छ ने त्यसलाई लत भनिन्छ । मानिसहरुको नशालु पर्दाथमा मात्रै लत लागेको हुँदैन । उनीहरुको विचारहरु पनि नराम्रो लत बनेर रहेका हुन्छन् । तल उल्लेख भएका केहि नराम्रा बानीहरु तपाँईमा छन् भने आजैदेखि छाडीहाल्नुहोस् । आफ्नो चाहना अनुसार अरु चलुन् भन्ने सोच सधैभरि जे हुन्छ ,सजिलो हुन्छ अनि मेरै [&hel..
सम्बन्ध बिछोड हुने अपत्यारिला कारण
सामान्यतया दाईजो, घरेलू हिंसा, एक्स्ट्रा म्यारिटियल अफेयरका कारण डिभोर्स हुने गरेको हामीले सुनेका र देखेका छौँ । तर सम्बन्ध बिछोडका केहि यस्ता कारणहरु पनि छन् जुन सुन्दा हामीलाई पत्याउन गाह्रो पर्छ । हामीलाई सामान्य लाग्ने हाम्रा आफ्नै बानी ब्यहोराले पनि हाम्रो सम्बन्धलाई अन्त्य गरेका हुन्छन् । सम्बन्ध बिछोड हुने केहि अपत्यारिला..
गर्मीमा घामबाट बच्ने १० घरेलु उपाय
गर्मी महिनामा छालामा बिभिन्न खाले समस्याहरु देखा पर्ने गर्छन् । बिशेष गरि अनुहारको छाला रुखो हुने , डढ्ने गर्छ । कतीलाई त गर्मीले एलर्जी हुने पनि गर्छ । घामबाट छालालाई जोगाउने १० घरेलु उपायहरु तल उल्लेख गरिएको छ । १. चिसो दुध कपासले अनुहारमा लगाउनले छालामा संक्रमण हुन पाउँदैन । यसमा भएको ल्याक्टीक […]
मन्दीरमा ध्यान दिनुपर्ने ८ कुरा ,बिर्सेर पनि नराख्नुहोस् गणेश र लक्ष्मी उठेका मुर्ती
घरमा मन्दीर त हामी सबैले बनाउने गर्छौँ । तर मन्दीरसँग सम्बन्धीत नियमहरु हामीमध्ये कमैलाई मात्र थाहा हुन्छ । मन्दीरमा मुर्तीहरुको संख्या कती हुनुपर्छ , मुर्तीहरु कस्ता हुनुपर्छ । यी कुराहरुको जानकारी हामीलाई कमै मात्रामा हुन्छ । आज हामी तपाईलाई मन्दीरका कहि नियमहरुको बारेमा जानकारी दिदैछौ । १. मन्दीरमा गणेश भगवानका तिन ओटा मुर्ती..
महिलाका यी कुरा पुरुषलाई मन पर्दैनन्
उग्रता महिलाहरुको उग्र स्वभाव पुरुषहरुलाई मनपर्दैन । पुरुषहरुसँग सधैँ टासिइरहनु, उनीहरुबिना आफू केहि पनि नभएको जताइरहनुजस्ता कुराहरु पुरुषहरुलाई मनपर्दैन । पुरुषहरु स्वतन्त्र एवं आवश्यक परेको खण्डमा पुरुषहरुको मद्दत लिने महिलाहरुलाई मनपराउने गर्दछन् । मौन रहनु तपाईं सोच्नु हुन्छ होला कि धेरै पटक मौन बस्दा पुरुषहरुलाई राम्रो लाग्..